निन्द्रा कम लाग्छ ? जान्नुहोस् किन ? - Sunaulo Nepal
निन्द्रा कम लाग्छ ? जान्नुहोस् किन...
निन्द्रा कम लाग्छ ? जान्नुहोस् किन ?
आषाढ १२, २०७८ शनिवार १२:०५ बजे
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण तिब्रगतिमा फैलिरहेका बेला बिरामी भएका १० मध्ये ३ जनामा निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्या भएको पाइएको छ ।
महामारी अघि पनि १० मध्ये ३ जनामा कुनै न कुनै तरिकाले निन्द्रासँग सम्बन्धित समस्या हुने गरेको थियो । तर निन्द्रासँग जोडिएको सबै समस्या रोग हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यही भएर निन्द्रा नलाग्नु कतिबेला रोग बन्न सक्छ र डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने जानकारीमा राख्नु आवश्यक छ ।
इन्टीच्यूट अफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड एलाएड साइन्सेसका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. ओमप्रकाश भन्छन् निन्द्राको एक साइकल ९० मिनेटको हुन्छ । एक रातको निन्द्रामा कम्तिमा ४ ५ साइकल पूरा हुन्छ ।
उनका अनुसार ९० मिनेटको साइकलको पहिलो चरणलाई नन र्यापिड आई मुभमेन्ट (एनआरइएम) निन्द्रा भनिन्छ । बोलिचालीको भाषामा यसलाई गहिरो निन्द्रा भनिन्छ । यो दोस्रो चरणको भन्दा लामो समयसम्म चल्छ । सुत्नुअघिको पहिलो ६० देखि ७० मिनेटसम्म चल्छ ।
दोस्रो चरणलाई र्यापिड आई मुभमेन्ट (आरइएम) निन्द्रा भनिन्छ । यो समयमा हामी सपना धेरै देख्छौं । धेरैजसो समय यो निन्द्रामा देखिएको सपना याद हुन्छ । जब हामी निदाउँछौं तब बिस्तारै पहिलो चरण घटेर दोस्रो चरण बढ्दै जान्छ । निन्द्रासँग सम्बन्धित रोग यिनै दुई चरणसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ ।
जसलाई एनआरइएम चरणसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ उनीहरु आफूलाई केही होस नभएको र निकै राम्रो निन्द्रा लागेको बताउँछन् । तर आरइएमको चरणमा समस्या रहेकाहरु बिहान छिटै उठेको वा राम्रोसँग सुत्नै नपाएको गुनासो गर्छन् ।
निन्द्रासँग जोडिएको समस्या, कतिबेला बन्छ रोग
निन्द्रासँग जोडिएको रोगको कुरा गर्दा विभिन्न समस्या देखिन सक्छ । जस्तै निन्द्रा नलाग्नु, धेरै निदाउनु, निन्द्रामा घुर्नु, निन्द्रामा डरलाग्दो आक्रमण हुनु । डा. ओमप्रकाश भन्छन् निन्द्रामा कुनै तरिकाको तनाव हुनु र त्योसँग सम्बन्धित रोग लाग्नुमा फरक छ ।
सबै मानिसमा महिनामा तीन चार दिन निन्द्रा नआउने समस्या रहन्छ । यस्तो अवास्थामा निन्द्रा सम्बन्धि रोग लाग्यो भन्न सकिँदैन । डिप्रेशन, एङजाइटी वा तनावसँग सम्बन्धित रोगीमा यो समस्या धेरै देखिएको छ । यसको केही दुष्प्रभाव छ स्मरण शक्ति घट्नु, निर्णय लिने क्षमता कम हुनु, संक्रमण र मोटोपना बढ्नु ।
निन्द्रा सम्बन्धी रोगको सुरुवाती लक्षण
पहिलो निन्द्राको घटनामा कमि
दोस्रो निन्द्राको गुणस्तरमा ध्यान
तेस्रो निन्द्राको समयमा समस्या
सुत्नुभन्दा दुई घण्टाअघि चिया कफी नपिउने
भारी भोजन नगर्ने
सुत्नुअघि धुमपान गर्दै नगर्ने
सुत्नको लागि छुट्टै खाट र ठाउँ तय गर्नुहोस् । त्यहाँ खाने, पढ्ने र खेल्ने जस्ता काम नगर्ने
दिउँसो एकैछिन सुत्नको लागि पनि आफ्नो खाटमा नसुत्ने
सुत्नुभन्दा दुई घण्टा अघि स्क्रिन नहेर्ने
बेला बेला शौचालय जानुपर्ने समस्या छ भने डाक्टरको सल्लाह लिने
मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या छ भने औषधि समयमा लिने
दैनिक काम रुटिन बनाएर गर्ने जसमा सुत्ने, उठ्ने र व्यायामको समय छुट्याउने ।
यी तरिका अपनाए निन्द्रामा आउने समस्या हट्नेमा मनोचिकित्सकले विश्वास लिएका छन् । तर यति गर्दागर्दै पनि समस्या आए चिकित्सकको सल्लाह लिन आवश्यक छ । डाक्टरको सल्लाहमा २ देखि ३ हप्ता औषधि आए समस्या हट्ने डाक्टरको भनाइ छ ।
बालबालिकालाई महामारीबाट जोगाउन सुझाव, यस्ता छन् लक्षण
थपिए ३१०६ काेराेना संक्रमित, २३ जनाको मृत्यु
३६११ काेराेना संक्रमित थपिए, २७ जनाको मृत्यु
नेपालमा थपियो कोरोनाको नयाँ ‘कप्पा’ भेरियन्ट